ယောင်းဟာအမှီအခိုကင်းတဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်နေပြီဆိုတာ သိသာစေတဲ့အချက် (၅) ချက် - For her Myanmar
ယောင်းဟာအမှီအခိုကင်းတဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်နေပြီဆိုတာ သိသာစေတဲ့အချက် (၅) ချက်
အမှီအခိုကင်းပြီး ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ဒီအချက်တွေ ရှိဖို့လိုတယ်
ယောင်းရေ… လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေကဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေကို အားနည်းတယ်၊ ဉာဏ်ရည်မမြင့်ဘူးဆိုပြီး နှိမ့်ချဆက်ဆံတာတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာတော့ အဲ့လို ရှေးရိုးစွဲအယူအဆတွေကို ခြေဖျက်ပြီး အမျိုးသမီးတွေလည်း မခေကြောင်း ပြလာကြပါပြီ။ တို့ မြန်မာနိုင်ငံကလည်း အောင်မြင်ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီးပေါ်ထွက်လာပြီမို့ ဒီထဲမှာ ယောင်းကောပါနေပြီလားဆိုတာ ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ တိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်…
(၁) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတယ်။
ယောင်းက ယောင်းရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းကို အမြဲတမ်းယုံကြည်ပါတယ်။ ဘယ်သူကိုမှလည်း မမှီခိုသလို ဘာကိုမှလည်း အားမထားပါဘူး။ ယောင်းမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေသေးနေတာကို သိပေမဲ့ ဒီအားနည်းချက်တွေကြောင့် ယောင်းကြိုးစားနေတာတွေကို ရပ်လိုက်မယ့် လူတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး။
(၂) လေးစားမှုကို ရှာဖွေတယ်။
ယောင်းလုပ်သမျှအရာတွေဟာ လူတွေဆီက attention ရဖို့လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဖြစ်စေ ကွယ်ရာမှာဖြစ်စေ ယောင်းက ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာကို ကိုယ်လုပ်တတ်သူပါ။ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ဖို့ထက် လူတွေဆီက လေးစားမှုကိုသာ တရားသောနည်းလမ်းနဲ့ ရယူချင်သူတစ်ယောက်ပေါ့။
(၃) သူများတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ဘူး။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သူများတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာ မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ရပ်မှန်း ယောင်းက ကောင်းကောင်းသိပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့် ယောင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ ပိုတော်ပိုကောင်းအောင် မြှင့်တင်ဖို့ပဲ ကြိုးစားပါတယ်။
(၄) ရိုးရိုးကျင့် မြင့်မြင့်ကြံတယ်။
အရှိကိုအရှိအတိုင်း နေတတ်ပြီး ရည်မှန်းချက် မြင့်မြင့်ထားပါတယ်။ ယောင်းရဲ့ ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ သူတစ်ပါးကို လီဆယ်ချောက်တွန်းမယ့်အစား ယောင်းရဲ့ အရည်အချင်းအမှန်နဲ့သာ တစ်ဆင့်ချင်း ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် တက်သွားမယ့်သူပါ။
ယောင်းအပေါ်မှာ မကောင်းတဲ့လူတွေကို အထူးတလည် ခေါင်းထဲထည့်ပြီး စိတ်ဆိုးနေမယ့်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်စားတွေချေမယ်ဆိုပြီး ဒရာမာခင်းမနေဘဲ ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန်ခေါင်းထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်မှာပါ။
ကဲ…ဒီအချက်တွေထဲက ဘယ်နှချက်လောက် ယောင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပြီလဲ ?
အမှီအခိုကငျးပွီး ထကျမွကျတဲ့ မိနျးမတဈယောကျဖွဈဖို့ဆိုရငျ ဒီအခကျြတှေ ရှိဖို့လိုတယျ
ယောငျးရေ… လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျစုနှဈတှကေဆိုရငျ အမြိုးသမီးတှကေို အားနညျးတယျ၊ ဉာဏျရညျမမွငျ့ဘူးဆိုပွီး နှိမျ့ခဆြကျဆံတာတှေ အမြားကွီးရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီခတျေမှာတော့ အဲ့လို ရှေးရိုးစှဲအယူအဆတှကေို ခွဖေကျြပွီး အမြိုးသမီးတှလေညျး မခကွေောငျး ပွလာကွပါပွီ။ တို့ မွနျမာနိုငျငံကလညျး အောငျမွငျထကျမွကျတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ အမြားကွီးပျေါထှကျလာပွီမို့ ဒီထဲမှာ ယောငျးကောပါနပွေီလားဆိုတာ ဒီအခကျြလေးတှနေဲ့ တိုကျကွညျ့လိုကျရအောငျ…
(၁) ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိတယျ။
ယောငျးက ယောငျးရဲ့လုပျနိုငျစှမျးကို အမွဲတမျးယုံကွညျပါတယျ။ ဘယျသူကိုမှလညျး မမှီခိုသလို ဘာကိုမှလညျး အားမထားပါဘူး။ ယောငျးမှာ အားနညျးခကျြတှေ ရှိနသေေးနတောကို သိပမေဲ့ ဒီအားနညျးခကျြတှကွေောငျ့ ယောငျးကွိုးစားနတောတှကေို ရပျလိုကျမယျ့ လူတဈယောကျ မဟုတျပါဘူး။
(၂) လေးစားမှုကို ရှာဖှတေယျ။
ယောငျးလုပျသမြှအရာတှဟော လူတှဆေီက attention ရဖို့လုပျနတော မဟုတျပါဘူး။ လူတှရေဲ့ရှမှေ့ောကျမှာဖွဈစေ ကှယျရာမှာဖွဈစေ ယောငျးက ကိုယျမှနျတယျထငျတာကို ကိုယျလုပျတတျသူပါ။ ပျေါပွူလာဖွဈဖို့ထကျ လူတှဆေီက လေးစားမှုကိုသာ တရားသောနညျးလမျးနဲ့ ရယူခငျြသူတဈယောကျပေါ့။
(၃) သူမြားတှနေဲ့ မနှိုငျးယှဉျဘူး။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သူမြားတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျတာ မှားယှငျးတဲ့ လုပျရပျမှနျး ယောငျးက ကောငျးကောငျးသိပွီးသားပါ။ ဒါကွောငျ့ ယောငျးဟာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျပဲ ပိုတျောပိုကောငျးအောငျ မွှငျ့တငျဖို့ပဲ ကွိုးစားပါတယျ။
(၄) ရိုးရိုးကငျြ့ မွငျ့မွငျ့ကွံတယျ။
အရှိကိုအရှိအတိုငျး နတေတျပွီး ရညျမှနျးခကျြ မွငျ့မွငျ့ထားပါတယျ။ ယောငျးရဲ့ ပနျးတိုငျကို အရောကျလှမျးနိုငျဖို့ သူတဈပါးကို လီဆယျခြောကျတှနျးမယျ့အစား ယောငျးရဲ့ အရညျအခငျြးအမှနျနဲ့သာ တဈဆငျ့ခငျြး ဖွညျးဖွညျးမှနျမှနျ တကျသှားမယျ့သူပါ။
ယောငျးအပျေါမှာ မကောငျးတဲ့လူတှကေို အထူးတလညျ ခေါငျးထဲထညျ့ပွီး စိတျဆိုးနမေယျ့သူ မဟုတျပါဘူး။ လကျစားတှခေမြေယျဆိုပွီး ဒရာမာခငျးမနဘေဲ ခှငျ့လှတျပေးလိုကျပွီး မွနျမွနျဆနျဆနျခေါငျးထဲက ထုတျပဈလိုကျမှာပါ။
ကဲ…ဒီအခကျြတှထေဲက ဘယျနှခကျြလောကျ ယောငျးနဲ့တိုကျဆိုငျနပွေီလဲ ?
Tags: empowering, facts, independent, strong, woman
Wathun May 1, 2019
ချွေးပေါက်ဆိုတာ ကျဉ်းလို့ကျယ်လို့ရတဲ့ အမျိုးလား
Hnin Ei Oo April 2, 2019